कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा सफलता मिलेको अमेरिकी कम्पनीको दाबी - Yatra Daily
Home अन्तर्राष्ट्रिय कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा सफलता मिलेको अमेरिकी कम्पनीको दाबी
म्यासाचुसेट्स, जेठ ६ – अमेरिकाको म्यासाचुसेट्सस्थित औषधि निर्माता कम्पनी ‘मोडर्ना इन्कर्पोरेट’ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षणमा सफलता मिलेको बताएको छ।
प्रारम्भिक चरणको परीक्षणमा कोरोना भाइरसविरुद्ध शरीरमा एन्टिबडी विकास गर्न आफ्नो खोप सफल भएको कम्पनीको दाबी छ।
अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थसँग मिलेर उक्त कम्पनीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप परीक्षण गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा खोप दिइएका स्वयंसेवकमा त्यसको सकारात्मक असर देखिएको कम्पनीको भनाइ छ।
सीएनएनका अनुसार भविष्‍यको अध्ययन पनि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो भने जनवरी २०२१ को पहिलो सातासम्ममा खोप उपलब्ध गराउन सकिने मोडर्नाका चिफ मेडिकल अफिसर डा. ताल ज्याक्सले बताए।
“यो पक्कै पनि राम्रो समाचार हो। खाली केही समय पर्खिनुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “पहिलो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा थोरे मानिसमा यो खोप सुरक्षित देखिएको छ। र, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सफल देखिएको छ।”
विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कोभिड-१९ विरुद्धको औषधिबारे मानिसमा क्लिनिकल परीक्षण गरिरहेका आठमध्ये एक कम्पनी हो, मोडर्ना। अन्य दुई पिफिजर र इनोभायो पनि अमेरिकाकै कम्पनी हुन्। बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्‍वविद्यालय र चारवटा चिनियाँ कम्पनी यसमा संलग्‍न छन्।
मोडर्नाले अध्ययनमा सहभागी दर्जनौंमा खोप दिएको छ। उनीहरूमध्ये आठजनामा एन्टिबडी विकासको अवस्था अध्ययन गरेको छ। आठैजनामा विकास भएको एन्टिबडीले कोभिड-१९ को प्रभाव कम गरेको देखिएको छ।
“यो कोभिड-१९ विरुद्ध खोप तयार हुने दिशामा पहिलो कदम हो,” ज्याक्स भन्छन्। मोडर्नाको यस क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी नरहेका डा. पल ओफिटले यसलाई ठूलो उपलब्धी भनेका छन्।
“यस खोपबाट विकास भएको केवल एन्टिबडीले भाइरसलाई बाँधेको मात्र होइन, शरीरका कोशिकाहरूमा भाइरसको संक्रमण रोक्न पनि सफल भएको छ,” उनले भने।
अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए)ले उक्त कम्पनीले अब दोस्रो चरणको परीक्षण थाल्ने बताएको छ। त्यसमा सयौं मानिसलाई सहभागी गराउने एफडीएको भनाइ छ।
आगामी जुनका लागि तय भइसकेको तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा दशौं हजार मानिसलाई सहभागी गराउने योजना छ।
Previous articleराजनीतिक दल एवं प्रशासनको संरक्षणमा गौ तस्करी र हत्या हुदै: अध्यक्ष पटेल
Next articleस्वाद र गन्ध थाहा नपाउनु पनि कोरोनाको लक्षण